Newsofexile.com: August 2009
जीवन एक झलक
जीवनको परिभाषा भन्नु नै दुःख हो । हरेक दुःखबाट नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ । जीवन भोगाइहरुको विचबाट निस्किने एक अनुभव हो । जीवनको विस्तृत रुपमा कसैले पनि परिभाषा गरेका छैनन् तर एक भरियालाई जीवन के हो भनि प्रश्न गर् यो भने उसले ूमेरो बाटेको नाम्लो हो निेू उत्तर दिन्छ । जीवनलाई प्रश्नहरुको चित्रमा सजाउने हो भने उत्तरहरु एक से एक आउँछन्् । यधपि जीवनमा प्रयोग हुने हिसाबहरुः किन कहिले कहाँ कसरी के लाई मानब जीवनले सृष्टि देखिनै प्रयोगात्म रुप दिदै आइरहेको कथा छ ।
जीवनलाई कसैले दुःखै-दुःखको संयोग भन्ने गरेका छन भने धेरै सुखमा मातिएकाले जीवन सुख हो भनि प्रतियोगितामा जित हातपर्ने गरेको देखीएको छ । जीवन खोज साधान र भावहरुको अर्को एक नमुना हो । हामी विचार गरौं कि साधु सन्तहरुको ध्यानतपस्याबाट निस्कीने एक विचार जीवन दर्शन बन्छ ।
यो जीवन कर्कलाको पताको पानी जस्तै हो । टिलपिल-टिलपिल हँुदै पातबाट जमिनमा खसि मटिमा मिलावट हुन्छ अनि नयाँ जिवनको पूर्नः रुपाँकन सुरु हुन थाल्दछ । मानव जीवन भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी को रुपमा चिनिदै विकाशको हरेक कार्यमा अगाडि देखिन्छ । इतिहासले धेरै ठूला-ठूला विद्धानहरुको जन्म गराई यो संसारलाई नयाँ अभिभावकको रुपमा जिम्मा दिएको छ ।
यूग २१औं शताब्दिमा हििडंसकेकाले समाज र राष्ट्रमा बस्ने मानबले आफनो पन र मनको लागिमात्र
काम गर्ने र अन्यलाई तिरस्कार गर्नाले हिसाँ दुब्र्यबहार द्धन्द्धको उत्पन्न हुने गर्दछ।
यिनै हिसाँ दुब्र्यबहार र द्धन्द्धले मानबको मन मष्तिकत्वमा त्रास फैलाउदछ । हामीले जिएको जीवन भनेको हरेक त्रास भयसंग जोडिएको हुन्छ । समाजमा कसैले नयाँ कुरा गर् यो भने कसरी यस्तो मान्छे बन्ने भन्ने बारेमा हरपल हाम्रो मनमा जिज्ञासा फैलिरहन्छ ।
प्रसंगलाई बदलौं । हिजोको हाम्रो समाजभन्दा आजको दिन-दिनै त्रासमय भन्दै गएको छ । कारण भने चाहि शिविरका अधिकाङश युवाहरु वेरोजगारी भएकाले पनि हो । शरणार्थी शरोकारवालाले हरेक समय अनुसार शिपमुलक शिप सिकाए पनि उनिहरुमा नयाँ परिवर्तनको सोच कहिल्यै विकास हुन सकेन फलस्वरुप यसको नकरात्मक असरहरु समस्याको रुपमा उभिएर शिविरमा एकलौटी हिडिरहेको देखिन्छ । अर्को कारण स्वादेश फिर्तीको नाममा तेस्रो खण्ड शरणार्थी शिविरमा भित्रिएपछिको हो । सबको मन एक-एक परिर्वतन भएपछिको निराश्यताको कारण पनि हो । त्यसैले हामी युवाले हाम्रो समाजका लागि जहिले पनि सकारत्मक सोच राखि नकारात्मक सोच भएका युवालाई परिवर्तन मा ल्याउनु युवा माचको उद्देश्य हो ।
प्रत्येक यूवा वर्गमा विचारको धार फरक-फरक हुन्छ तर हामी इतिहासदेखि नै पिडीत भएकालॆ न त हामीले आफ्नो देश देख्न पायौ न त हामीले कुनै नयाँ काम नै गर्न सक्यौ । हामी रहेको देशमा हामीले हातमा हात काध-काधमा मिलाई समाजमा दिन-प्रतिदिन घट्ने हिसांलाई अन्त्य गरि हिसां रहित समाज निमार्णमा सबै जुटेमा सकारात्मक पक्षको मत बलियो हुनेथियो । त्यसैले हाम्रो समाजमा घट्ने हिसांहरु प्रति औलाउनु भन्दापनि त्यसलाई जरैदेखि फाल्नु उचित छ । हामीले गरेको दैनिक कार्यहरु वर्तमानका लागिमात्र नभएर भविष्यकालागि पनि गुणात्म हुने भएकाले बेलै देखि जोड गुना भागा र जीवन समाप्तसम्म हुने हिसाबलाई समाजमा उदारहणाको अभियान देखाइ सबैको मायालु बन्नुमा धन्य हुने छ । त्यसैले नराम्रो कुलतबाट तपाई आफ्रै निस्किनुहोस् अनि नयाँ जीवनको मार्गमा हामीलाई सहयोग गनुहोस् । एउट भनाइ नै छ डा। योगिविकाशनन्दको ूसंसार बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छू। हो यो भनाइलाई सार्थकता दिने हो भनि हाम्रो समाज हामीबाटै परिर्वतन हुन्छ ।
हामी भन्नाले युवामाच । जहाँ तँपाई- हाम्रो जीवनलाई कुनैपनि रोग हिसां दुब्र्यवहार तिरस्कार अपराधिक कार्य करणी आदि नलागोस नपरोस् भनि अहोरात्ररुपमा जनचेतनामूलक अभियानमार्फत के यूवा के शरणार्थी प्रभावित क्षेत्र लगायत के शरणार्थी सबैलाई चेतना दिदैं समाजमा माया बटुलिरहेको छ । फेरि युवामाच भन्नाले सबै थोक चाँहि होइन जीवनमा तर पनि हाम्रो हिडाइको दोस्रो खुट्किलो हो जहाँ हामी राम्रो र नराम्रो कार्यको सहि चिन्ह लगाउन सक्षम बन्दछौ ।
समग्रमा युवामाच हामीलाई सकरात्क सोंच दिनको लागि अहोरात्र लागि परेको छ । यसको अभियानले हाम्रो जीवनलाई
सार्थक तुल्याउने अनगिन्ति कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । हामी युवाहरु भनेको भोलिका कर्णधार हौं । यति सुन्दर जीवन फेरिफेरि पाइदैन । यसलाई हामीले उपलब्धीमुलक वनाउन आवश्यक छ । जीवन सुरक्षित रहें संभावनाहरु त एकदिन न एकदिन त अवश्य आउँछन नै । हामीले हरेश खाएर जीवनलाई कुलतमा लगाउनु हुँदैन । जसरी हिउँदमा रुखका सवै पातहरु झरेर प्रकृति उजाड वन्दछ । फेरि बसन्त ऋतुमा नयाँ पालुवाकासाथ प्रकृति हराभरा भएर आउँछ । जीवन पनि त्यसतै हो । समस्या आयो भनेर हामीले डराउनु हुन्न । हरेस खानु हुन्न । कारण समस्यासँगै संभावना पनि आउछ तर धैर्य गर्नु पर्दछ । जीवन मुख्य कुरो हो । जीवन रहे वाँकी सवै कुरा विस्तारै उपलब्ध हुनसक्छ । अतः यति सुन्दर जीवनलाई कुलतमा लगाएर वर्वाद नपारौं ।
स्वादेश फिर्तीकै निम्ति काम गर्छौ
झापा र मोरङका ७ वटै भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिवहरुले शरणार्थीहरु पुनस्थापना गरिएका मुलुक घुम्न पाँउ भनिदिएको निबेदनप्रति आत्मआलोचना गरेका छन् ।गएको भदौ २ मा सचिवहरुले संयुक्त रुपमा अन्तराष्ट्रिय आप्रबास संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघिय शरणार्थी आयोगमा पुनस्थापना गरिएका ७ वटै मुलुक घुम्न पाँउ भनि दिबेदन दिएका थिए । भुटानमा संघर्षरत बिभिन्न संगठनले त्यसको बिरोध र आलोचना गरेपछि साता दिनपछि सचिवहरुले गल्ती भएको स्वीकार्दै स्वदेश फिर्तीको पक्षमा कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन् । आज सचिवहरुले संयुक्त बिज्ञप्ती मार्फत आफुहरुले पुनर्बास भएका भुटानीहरुको अवस्था बुझ्नका लागि निबेदन दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:54 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:11 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 4:49 AM No comments:
सडक नाटक सम्वन्धी तालिम
भुटानी शरणार्थी शिविर टिमाइस्थित युवा मैत्री केन्द्रले आयोजना गरेको सात दिने सडक नाटक सम्वन्धी तालिम आज सम्पन्न भएको छ । गत १८ अप्रिलदेखि शुरु भएको उक्त तालिममा सातैवटा शिविरका गरि ३० जना प्रशिक्षार्थीहरुले भाग लिएका थिए । चन्द्र पराजुली र सुदर्शन शर्मा (गुन्द्रुके कान्छा)को शहजीकरणमा सम्पन्न उक्त तालिममा प्रकाश आङदेम्बे र गन्तव्य थिएटर तथा शनिश्चरे शिविरका केदार उप्रेतीको सहयोग रहेको थियो ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 4:42 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 4:22 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 7:04 AM No comments:
भूटानी शरणार्थी शिविरहरु डुबानमा पर्ने खतरा नरहेको एक निरिक्षण टोलीले जानकारी दिएको छ । शिविर निरिक्षण गर्ने गएको टोलीले शिविरको छाप्रा शिविर आसपासमा रहेको खोलाहरुको निरिक्षण गरि कटान भत्काएको ठाँउमा बोरामा माटो लगाई छेकबेर गरेको शरणार्थी प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
टोलीमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिशिवीर प्रमुख यूएए्चसिआरका प्रतिनिधि लुथरन विश्व फेडेरेसनबाट क्याम्प अधिकृत शिविर सचिबआदिको उपश्थिती रहेको थियो । टोलीको जानकारी अनुसार भूटानी शरणार्थी शिविर बेलडागी-१मा पर्ने रतुवा खोलाले सेक्टर इ को सेक्टर रातभरि पानी परेमा डुबाउन सक्ने अनुभाव रहेको बताएका छन् भनि बेलाडी-२ ३ को केही सेक्टर भने पानीले डुबाएको र छाप्राहरु चुहिएर बसिनसक्नु भएको शिविर सचिब नारदमुनि सन्यासिले बताउनु भएको छ ।
त्यसैगरी झापाको गोलधाप शरणार्थी शिविरको दोउनि खोलाले पुल भत्काएपछि शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न सघं-सस्थाका सबारी साधान आवात जावत गर्ने नसेकेको क्याम्प ब्यावस्थापन समितीले जानकारी दिएको छ । खोलाले पुल भत्किदु गोलधापस्थित भुटानी शरणार्थी शिबिर जाने बाटो टुटेको छ । त्यो शिबिरका पाँचसय छाप्रा डुबानमा परेकाले ति छाप्राका शरणार्थीलाई शिबिरकै अन्य भागमा सारिएको छ ।
त्यहाँ आज बिहानैदेखि सहायता संस्थाका प्रतिनिधि पुग्न सकेका छैनन् ।
सो पुलको निमार्ण कार्य आज देखि साचालन हुन थालेको छ । भने टिमाई र खुदुनाबारी शिविरका शरणार्थीहरुको छाप्रा चुहिएर बसि नसक्नु भएको र खोला बढेर शिविर भित्र पस्न सक्ने संभावन रहेको शिविर सचिवले जानकारी दिनु भएको छ ।
अविरल बर्षका कारण शरणार्थी छाप्राहरु चुहिएपछि निमार्णा कार्यका लागि शरणार्थीले क्याम्प अधिकृत समक्ष लेखित निवेदन चडाए पनि कुनै समाग्री नपाएको गुनासो शरणार्थीहरुले गरेका छन् भने सो कार्यहरुको पुर्ननिमार्ण र खोलाको खतारा छेकबेर गर्नेका लागि बेलडागी-१का शिविर प्रमुख र्हक बाहादुर राईले शरणाथी शरोकारवाल लगायत शरणार्थी समन्वय समितीमा जानकारी गराइसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सात शिविरहरुमै खोलाले कटान गरेको ठाँउहरुमा छेकबेर गर्नकालागि लुथरन बिश्व फेडेरेसन विश्व खाद्यन्न कार्यक्रम र यूएनएचसिआरले बोरा लगायत विशेष समाग्री वितरण गरिसकेको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:38 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:24 AM No comments:
शिविरमा सदभाव पर्चा
>भुटानी शरणर्थीहरुको एउटा समुहले शिविरभित्र आपसि समझादारी र सदभाव कायम राख्न सार्वजानिक अपिल गरेको छ । स्वदेश प्रेमि भुटानी समुह नामक संगठनले झापा र मोरङका सात ओटै शिविरहरुमा पर्चा छरेर तयस्तो अपिल गरेको हो । सो समुहले पछिल्लो समयमा शिविर भित्र शरणर्थीहरु बिच बढेको असमझदारी र मनोमालिन्यले शिविरमा अशान्तिभई िहंसा मच्चिने संभावना बढेको भन्दै गम्भिर चिन्ता समेत व्यत्त गरेको छ ।
पर्चामा अष्ट्रेलिया पुन्र्ववास भएका भुटानी अधिकारवादी नेता रतन गजमेरको पुन नेपाल आगामन प्रति असन्तुष्टी समेत जनाइएको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:19 AM No comments:
झापाको दमकामा अवस्थित सिद्धार्थ उच्च माध्यामिक बिधालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुट पिट गरेको भन्दै आक्रोसित भएका विद्यार्थीहरुको तोडफोडबाट बिद्यालयमा १० लाख बराबरको क्ष्यति भएको छ । झापाको दमक-१२ मा अवस्थित सो उच्च माविमा सोमबार पठपाठन भइरहेको समयमा कक्षा १२ को ब्यवस्थापन संकाय अध्ययनरत बिद्यार्थी श्याम चौलागाईलाई अनावश्यक गालि गर्दै स्कुलका प्रोपाईटर तेज कुमार श्रेष्ठले कुटपीट गरेको भन्दै आक्रोसमा आएका विद्यार्थीले विद्यालय भवनहरुमा गरेको तोडफोड बाट सो क्ष्यति भएको हो । बिद्यार्थीअरुको तोडफोडबाट स्कुलको प्रत्येक कोडामा हालै मात्र जडीत कुल ४ लाख बराबरको ३२ थान सि-सि क्यामरा ध्वस्त भएको स्कुलका संचालिका माजु श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ । संचालिका श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय भवनका सबै कोठामा रहेको पंखा कालो पाटी बत्ति तथा बेन्चहहरु समेतमा क्ष्यति पुगको छ । भने स्कुलले संचालन गर्दै आएको तीन वटा स्कुलबसहरुमा समेतमा समेत क्ष्यति पुगेको छ ।
घटना लगतै बसेको स्कुलको संाचालक समितिको बैठकले स्कुलमा थप क्ष्यति हुन नदिने उदेश्यका साथ घटनाको बिषयलाई लिएर कसैलाई पनि कारवाही नगर्ने तर आगामि दिनहरुमा स्कुलले बनाएको नियममा बस्न नसक्नेहरलाई आफुहरु कारवाही गर्न तयारीमा रहेको निर्णय गरेको स्कुलमा संाचालक श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ ।स्कुलको निर्णय लगतै पुन विद्यार्थीहरुले असन्तुटी जनाएको छ ।
केही विद्यार्थीहरुले आफुहरु माथि स्कुलले अनावश्यक रुपमा दमन गर्न खोजेको कुरालाई लुकाएर स्कुल चोखो बन्न खोजीरहेकोले आफुहरु स्कुलको निर्णय प्रति असन्तुष्ट रहेको नाम नखुलाउने सर्तमा सोही बिद्यालयका एक समुह बिद्यार्थीहरुले जानकारी गराएका छन् । भने शिक्षक तथा संाचालक श्रेष्ठले स्कुलको नियम विपरित अवस्थामा भेटेको कारण आफुले सामान्य सजक गराउने प्रयास मात्र गरेको जनाउनु भएको छ ।शिक्षकले अनावश्यक रुपमा बिद्यार्थीलाई्र कुटपिट गरेकोका भन्दै शिक्षक लाई कारवाहीको माग गर्दै नारावाजी गरिरहेका बिद्यार्थीहरुको आक्रोसित भिडलाई नियन्त्रण गर्न स्थानि जनपथ प्रहरी र ससशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएको थियो । बिद्यार्थीहरुल स्कुलको प्राङ्गणमा शिक्षक श्रेष्ठको पुत्ला समेत दहन गरेको थियो ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:00 AM No comments:
खोलामा पहिरो खसेर नदीको पानी वग्न नपाएका कारण जमेको पोखरी फुट्ने खतरा भएपछि वेलडाँगी शरणार्थी शिविर र आसपास क्षेत्रका मानिसको भागदौड मच्चिएको छ ।झापाको पश्चिम उत्तर स्थित इलामको चुलाचुली-९ र वाँझो- २को विचमा भएर वग्ने सुन्दुवा खोलामा नजिकैको पहाड खसेर नदी वग्ने वाटो वन्द भएको छ ।
यसरी नदीको वाटो वन्द भएपछि सो क्षेत्रमा पानी जमेर विशाल पोखरीको रुपमा परिणत भएको छ । सो पोखरी फुट्ने खतरा भएपछि चुलाचुली-२, वाँझो -२ र झापाको दमकस्थित वेलाडाँगी १ को भुटानी शरणार्थी शिविरमा समेत भागदौड भएको छ । पोखरी फुटेर वगाउने त्रासका कारण वेलडागी १ को सेक्टर वि,सी, एफ, र जीका शरणार्थीले आफ्नो धनमाल र लुगा फाटो वोकेर सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्ने तयारीमा रहेका छन् । शिविर सचिव टिवि गुरुङले दिएको जानकरी अनुसार शुक्रवार मध्यान्ह्र सो पहिरो खसेको थियो । साँझसम्ममा ४५ क्युसेक पानी जमेको कुरा भुटानी शरणार्थी शिविरको रेखदेखमा सम्लग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनएचसिआरले जनाएको छ ।उक्त स्थानमा पाथिभरा सशस्त्र प्रहरी गणवाट गएका दर्जनौ प्रहरी जवान र सयौं स्थानिय वासिन्दा उद्धार कार्यमा खटिएका छन् । साथै सम्भावित खतरावाट वच्न शिविर तथा स्थानिय वासीन्दालाई सजग गराउन माइकिङ गर्ने काम भइरहेको कुरा प्रहरीले जनाएको छ । वर्षा भइरहेकाले पानीको मात्रा वढ्ने त्रम जारी रहेको छ ।यसका लागि पोखरी खोलेर पानी निकास गराउन क्रेन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 1:38 AM No comments:
के कानुन र कानुन व्यवसायी भुटानीका खिलाफ नै हुन?
कुरो एउटा दम्पतीको मात्र होइन, पुनर्वासको होइन, व्यक्तिको होइन अनि होइन विचित्र घटनाको मात्र पनि - कुरो हो मानवीय सम्वेदना अनि आचरणको । जव आज आएर बजारमा सरेआम नाङ्गो नृत्य देखाउन थालियो तव त्यस ताण्डव नृत्यको शिकार हुने संघारमा उभिएर धरौटीमा बस्न बाध्य भए पुनर्वास भएका भुटानीहरु ।
कानुन व्यवसायी मित्रहरु, तिमीहरु कानुन बनाउने कारखाना नसम्झिनु आफूलाई र कानुनका ठेकेदार बन्न पनि नखोज्नु । किनकी कानुन व्यक्तिले भन्दा पनि चलन र प्रवृत्तिले चलेको मौसमी खेती हो । अनि कानुन भनेको व्यक्तिपिच्छे भन्दा पनि समग्रमा सवैलाई समेट्ने एउटा व्रम्हास्त्र हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । गाली किन गर्छ सुलसुले कानुनका खेतीवालालाई भने रतन गजमेरको गिरफ्तारी र रिहा अनि त्यसबाट उव्जिएको वादप्रतिवादको चर्चाले हो । तेस्रो मुलुकबाट रतन दम्पती नेपाल आए अनि गिरफ्तारीमा परे । सायद त्यो स्वभाविक होला सरकारले गर्ने कार्य तर जव रिहा भए तव कानुनका क्रषक अघि सरेर बोले - “त्यो दुर्भाग्य थियो रतनलाई एक महिनाको प्रवेशाज्ञा दिनु ।” कतिसम्म दुरासयपूर्ण अनि निन्दनिय अभिव्यक्ति दिन सक्छन् ती निकृष्ट सोचका व्यापारी कानुनका ? के अष्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि देशमा पुनर्वास भयो भन्दैमा उ त्यसै देशको नागरिक भइहाल्यो ? अनि उसको रुपरंग, केशभेष इत्यादि गोरेकै भाँति भएछ त ? उसले/उनीहरुले अव नेपालको माटो टेक्ने वित्तिकै कानुनले उसको/उनीहरुको खेदोपाइलो गरि हाल्छ ? के सवै नेपाली आम जनसमुदाय त्यसै भन्छन् कि मुठ्ठीभर तथाकथित कानुनका कारखाना मात्र त्यस्तो उद्घोषणमा उत्रिएका हुन् ?
यस्ता प्रश्न धेरै छन्, लेखिसाध्य नै छैन, सोधिसाध्य नै छैन तर आम नेपालीले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि भुटानी शरणार्थीहरु नेपालीसँग चिनीपानी भइ मिलेर बसेका थिए÷छन् भने पुनर्वास भएर गएका अधिकाँश शरणार्थीहरु प्रगाढ भावनात्मक सम्वन्ध लिएर र गाँसेर गएकमा छन् अनि कति परिवार त पुनर्वासबाट फर्केर नेपालमै बसोबास गर्ने मनसाय बोकेर गएका छन् । कैंयन शरणार्थीहरूले स्थानीय नेपालीहरूलाइ सहयोग गर्दैछन् भने हज्जारौं लाखौं डलर नेपाल भित्रिन लागेको छ रेमिट्यान्समार्फत ।अनि नेपाली जनसमुदायलाई व्यक्तिगत रुपमा आपसी सम्वन्धको राम्रो सम्वन्ध भएको बेला रतन नेपाल भित्रिँदा र उसलाई प्रवेशाज्ञा दिँदा किन त्यत्रो हैरानी ती व्यवसायीलाई ?
गोरेहरु लोभ्याउन र भित्र्याउन नेपाल भ्रमण वर्ष, विभिन्न ठाउँ भ्रमण वर्ष इत्यादि जस्ता पर्व उमार्न सक्ने देश र देशवासीले किन त्यो २० बर्ष लामो इतिहार्सला एकैपलमा स्वाहा पार्न खोजेको ?
होइन भने, पुनर्वास भएका शरणार्थीलाई विनारोकटोक प्रवेशाज्ञा र ओहोरदोहोरको अवसर दिइनु पर्छ अनि उनीहरुको नेपालप्रतिको अपनत्वको सम्मान गर्दै चाहन्छन् भने नागरिकतासम्म पनि दिन नेपाल र नेपालीले हिचकिचाउनु हुँदैन । आखिर आपराधिक मनोवृत्तिका विहारीलाई थोकको भाउमा सरकार ४० लाख नागरिकता वेच्न सक्छ भने सवालाख नेपाली मूलका इमान्दार र नेपालप्रति वफादार नेपालीलाई दिन किन कञ्जुस्याईं र आनाकानी ?
जे होस् अव उप्रान्त सरकार, कुनै पनि व्यवसायी इत्यादिले कुनै पनि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, व्यक्तिगत आदि जस्ता सवालमा बोल्दा, लेख्दा र अभिव्यक्ति दिनु पर्दा सोचेर, गमेर कदम चाले सवैका लागि हितकर हुने थियो भने अभिव्यक्ति दिनेप्रतिको आम मानिसको धारणा पनि सकारात्मक नै रहने हुन सक्छ । उखानै छ नि “आफू भलो त जगतै भलो ।”
Posted by अर्जुन प्रधान at 3:57 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 3:50 AM No comments:
अधिकारी हत्या प्रकरणले उव्जाएको प्रश्न
भुटानी शरणार्थी पुनर्वास गराउन थालेको एक बर्ष वितिनसक्दै शरणार्थी युवा हरिलाल अधिकारीको अमेरिकाको फ्लोरिडामा हत्या भएको छ । यति मात्र कहाँ हो र दिनहुँजसो कुटाई र लुटपाटको खवर शरणार्थी क्याम्पमा सनसनी बन्ने गरेको छ । यसले पुनर्वासमा जान खुट्टा उचालेर बसेकाहरुलाई पुनर्वास जाने निर्णय कतै गलत पो गरियो कि भन्ने लागेको छ । यसले शरणार्थीहरु पुनर्वास गराउने ठेक्का पाएको संस्था आइओएम र शरणार्थी पुनर्वास गराउने देशहरुको आश्वासन फोस्रो सावित भएको छ। यति मात्र होइन, मानविय आधारमा शरणार्थी पुनर्वास गराएको बताउने देशहरुप्रति ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको स्पष्ट हुन्छ । यो प्रक्रिया भुटानी लोकतान्त्रिक आन्दोलन तुहाउने षडयन्त्र हो भन्ने कुरा बुझ्न जो कोहीलाई पनि सजिलो पारिदिएको छ । यस प्रकरणले निम्न प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ ।
क) शरणार्थीको सुरक्षाको प्रश्न -
हरिलाल अधिकारीको हत्यापछि के शरणार्थीहरुको दीर्घकालीन समस्याको समाधान आफू पुनर्वास भएको देशमा कुटाई, डर र त्राससँग बस्नु हो ? या जागिरको लागि भौंतारिनु र लुटिनु हो ? अथवा शरणार्थीहरुको दिनदहाडै हत्या दीर्घकालीन समाधान हो ? पुनर्वास गराउने देशहरु, संघसंस्थाहरु र पुनर्वास पक्षधर नेताहरुले सटीक जवाफ दिनै पर्छ । पुनर्वासअघि सम्वन्धित देशहरु र संस्थाले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भने पनि यथार्थ अर्कै पाइयो । यसको सटीक प्रमाण हो - बेलडाँगीबाट न्यूयोर्क पुगेका ओडारी परिवार र रिजाल परिवारले खाएको मारपिटाई र फ्लोरिडामा भएको हरिलालको हत्या संसारलाई नै दादागिरी देखाउने देशमा गएर सुरक्षित रहने र सुखसुविधा उपभोग गर्ने सपना, सपना मै सीमित रहने देखिन्छ । शरणार्थीहरुको सुरक्षा जहाँ गए पनि खासै सुरक्षित नहुने यथार्थ छर्लाङ्ग छ ।
ख) रोजगारीको सुनिश्चिततमा प्रश्न -
पूँजीवादी देशहरुमा भएको आर्थिक मन्दीले आज लाखौं मानिसहरु बेरोजगार बनेका छन् । पूँजीवादी देशहरुमध्ये अमेरिका वित्तिय संकटको केन्द्रविन्दु हो, जहाँ ६० हजार शरणार्थी पुनर्वास गराउन अमेरिका तम्सिएको छ । एकातिर आफ्नै देशमा आर्थिक संकटले रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्ध शिक्षित भुटानीहरुले जागिर पाउने सम्भावना निकै कम छ । कसै कसैले पाइहाले पनि नपढेका सामान्य मानिसले गर्ने साधारण काम पाउने छन् । यसले पुनर्वास हुने अधिकाँशको जीवन कष्टकर हुने राम्रो जोखाना देख्न सकिन्छ ।
ग) मानवीय समस्या गलत सावित ­-
भुटानी शरणार्थी समस्या मानवीय आधारमा हल गर्न तेश्रो देश पुनर्वास गराइएको भन्ने तर्क देखावटी भएको पुष्टि गरिदिएको छ । यदि मानविय हुँदो हो त पुनर्वास भएकाहरुले कुटपिट र हत्याको शिकार बन्नु पर्ने थिएन । उनीहरुलाई मानविय आधारमा रेखदेख र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरिन्थ्यो होला, जसले पुनर्वास भएकाहरु विना कुनै डर, त्रास बस्ने थिए ।
भुटानी शरणार्थी समस्या विलकुल राजनैतिक समस्या हो । यो भुटानमा लोगतन्त्र वहाली गर्ने लर्डाईंसँग जोडिएको मुद्दा हो । यसको समाधान राजनैतिक आधारमा गरिनुपर्छ । निरंकुशता विरुद्धको संघर्षलाई सवैले साथ दिनु पर्दछ । यसको मतलव भुटानीहरुलाई स-सम्मान स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यान जानु जरुरी छ ।
घ) भुटानी क्रान्ति तुहाउने नियत -
सन् १९९० मा लोकतन्त्रका लागि भुटानी जनताले देशव्यापी विद्रोह गरेका थिए । उक्त विद्रोहलाई दवाउन वाङचुक राजतन्त्रको मुख्यतः दक्षिण भुटानीलाई निशाना बनाएर नागरिक उच्छेद नीति लागू गरेको हो । जसले निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष गर्न खोज्छ वा गर्छ उसैलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण देश निकाला गर्दै आयो । यसको मुख्य मार दक्षिण भुटानी गोर्खालीहरुलाई पर्यो भने पूर्वी भुटानी सार्छोप समुदायलाई पनि अछुतो राखने । यसैको परिणाम एकलाख बढि भुटानीहरु नेपालमा शरणार्थी जीवन विताइरहेका छन् ।
१८ वर्ष शरणार्थी जीवन विताएका भुटानीहरुले स्वदेश फिर्तीका लागि पटक पटक आन्दोलन गरे र बर्तमान घडीमा पनि गरि नै रहेका छन् । शरणार्थीहरु संगठित भएर बस्नु आफैंमा एउटा आन्दोलन हो । वाङचुक राजतन्त्रको लागि टाउको दुखाइको विषय हो । तर संगठित भुटानीहरुलाई फुटाएर आज निरंकुश राजतन्त्रको आयु लम्व्याउने काम भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको छ । यस्तो कामले सामन्तवादको सेवा गरेको छ । यसले अन्ततः प्रतिकृयावादीहरुकै सेवा गरेको छ ।
सन् २००१ मा कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थापना पश्चात दक्षिण एसियाभरि नै कम्यूनिष्टहरु हावी हुने देखेर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी नै लागेर ग्र्याण्ड डिजाइन बनाएका हुन् । क्रान्ति तुहाउन तेस्रो देश पुनर्वास यसैको एउटा कडि हो । यसमा मुख्यतः अमेरिकाको स्वार्थ अन्तरनिहित छ । जुन कुरा विगतको जोन मेकएनको भुटान भ्रमणबाट स्पष्ट भएको छ । शरणार्थी पुनर्वास गराइदिए वापत भुटानमा राजदुतावास खोल्ने र चीनलाई घेरावन्दी गर्दै दक्षिण एसियामा आफ्नो सैनिक अखडा मजवुत बनाउने, यिनै स्वार्थको कारण अमेरिकाले आर्थिक संकटका कारण आफ्नै देशमा वेरोजगार बढिरहँदा पनि शरणार्थीहरुलाई पुनर्वास गराउन तयार भएको हो । अधिकारी हत्या प्रकरणले यहि पुष्टी गरेको छ ।
ङ) सस्तो श्रम शोषण -
शरणार्थीहरुको दयनीय अवस्थाको फाइदा उठाएर सस्तो श्रम शोषण गर्न पनि उनीहरुलाई लाखौं खर्च गरेर त्यहाँ लगिएको छ । पुनर्वास भएका हरुले सस्तोमा काम गरिदिएपछि बर्षौंदेखि काम गर्दै आएका अमेरिकी मूलका काला जातिलाई कामबाट निकालियो । यस्ता कुराले विशेषतः कालाजातिमा आक्रोस पैदा भयो, जसको परिणाम हरि हत्या प्रकरणसम्म आइपुग्यो । यो र यस्तै कुराले शरणार्थीहरुको श्रम शोषण हुने छर्लङ्ग देखिन्छ ।
फ्लोरिडामा भएको प्रकरणलाई सामान्य घटनाका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले धेरै यथार्थहरु उदाङ्गो पारिदिएको छ । पुनर्वास भएकाहरुको सुरक्षा सम्वेदनशील बनेको छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी संकटमा परेको छ । मानवीय समस्या हल गर्ने नामले राजनैतिक स्वार्थ पूरा गरिदिएको छ । यसमा प्रतिक्रियावादीहरुको साँठगाँठ राम्रो छ । मुख्यतः भुटानी क्रान्ति तुहाउन थिम्पु-वासिङ्गटन देखि दिल्लीसम्मको शक्ति खनिएको छ । यस विरुद्ध भुटानी जनताले संघर्ष गर्नै पर्दछ । आफ्नो अस्तित्वको लागि संघर्ष नै अन्तिम विकल्प हो । यही हो हरि हत्या प्रकरणले सिकाएको पाठ । त्यसैले भुटानी जनता एक हौं, राष्टि्यता र स्वभिमानका लागि लडौं । यसैमा हाम्रो सपना पूरा हुनेछ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 3:46 AM No comments:
सरकार समक्ष सुरक्षाको माग
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चा भुटानले भुटानी नेतृत्वमाथि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै नेपाल सरकार समक्ष बलियो सुरक्षाको माग गरेको छ । मोर्चाले हिंजो झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको ७ बुंदे ज्ञापन पत्रमा शिविरहरुमा नेतृत्व पंक्तीका खिलापमा चेतावनीमुलक पर्चा बितरण भएको सम्झाउंदै सुरक्षाको माग गरेको छ । मोर्चाले प्रजिअलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा नेपालले शरणार्थी मामिला हेर्न स्थायी कार्यदल बनाउनु पर्ने, घरफिर्ती र स्थानीय समायोजन जस्ता शरणार्थी समस्या समाधानका बाँकी २ बिकल्प पनि खुल्ला हुनुपर्ने, पूनर्वासका कारण खस्किएको शरणार्थी शिक्षाको स्तर उकास्न समन्वयकारी पहल गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्ष बेलडाँगी २ र मेची पुलमा मारिएका ३ शरणार्थीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:43 AM No comments:
डेढ वर्षमा १८ हजार पूनर्वास
पछिल्लो डेढ वर्षमा १८ हजार दुइ सय ३५ भुटानी शरणार्थी पूनर्वासमा तेस्रो देश गइसकेका छन् ।
शरणार्थी पूनर्वास गराइरहेको संस्था आइओएमले दिएको जानकारी अनुसार १६ हजार ६४ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिकामा पूनर्वास गरिएका छन् ।
यसैगरी न्युजिल्याण्डमा २ सय ९४ जना, नेदरल्याण्डमा एक सय २७ जना, नर्बेमा २ सय ११ जना, डेनमार्कमा १ सय ७२ जना, अष्ट्रेलियामा ८ सय १३ जना र क्यानडामा ५ सय ५५ शरणार्थी पूनर्वास गइसकेका छन् ।
अहिले सम्ममा पूनर्वासको इच्छापत्र भरेका शरणार्थीको संख्या ७४ हजार नाघिसकेको छ ।
उता बिभिन्न चार भुटानी संगठनहरुले शुरु गरेको शरणार्थी घर फिर्ती फारम भराउ अभियानमा अहिले सम्ममा २२ हजार शरणार्थी सहभागी भइसकेको बताइएको छ ।
बैशाख २१ ग्ते त्यो अभियान अधिकारबादी संगठन हृयुरोव, भुटानी ज्येष्ठ नागरिक समूह, भुटान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा र शरणार्थी स्वदेशफिर्ती कार्यक्रम परिषदले संयुक्त रुपमा शुरु गरेका हुन ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:40 AM No comments:
साथी भाई, छर-छिमैक, नाता गोता पर्ने आफ्न्तालाई शरणार्थीले पूनर्वासमा जानु अघिका दिन रातभरि गित,संगित,मारुनि आदि साँस्कृतिक कार्यक्रम गरि विदाई गर्ने प्रचलन अभियानकै रूपमा छ ।
हिजो राति पनि विदाइका हातमा मायाको चिनो लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका शरणार्थी युवाहरु मदिराको तालमा रातभरि कराए, नाचे अनि १२ बजेपछि रितामाथि आक्रमणको शैलीमा अनुहारमा घुस्सा प्रहार गरि आँगनमा लडाई कुटपिट गरे भन्दै थिइन् ८५ बर्षिया हजूरआमा दिलमाया सुब्बा ।
घटना हो, विहिबार रातिको जहाँ भूटानी शरणार्थी शिविर बेलडागी-१,सेक्टर इ/२ छाप्रा न. २०९मा बस्ने २४ बषिर्या रिता सुब्वामाथि भएको आक्रमणको । सुब्बामाथि एक अज्ञात समूह जो भिम प्रसाद ढुङ्गेल ( इ/२-२०७)को परिवारलाई विदाई गर्न भनि ढुङ्गेलको छोरा दिपकसँग हुल कसिएर राती आएको थियो ।
त्यो समूहको प्रहारमा परि घाइते भएकी सुब्बालाई उपचारका लागि दमकको लाइफ लाइन लगिएको परिवारिक सोतले जनाएको छ ।
लागु पर्दथ सेवन गरि रातभरि छर-छिमेकीको घर चियाउने, छोरीचेलीमाथि सुमसुमाउने तथा अपारहणको योजन निर्माण गर्ने शरणार्थी युवाले अमेरिकामा भई रहेको घटनालाई शिविरमा पनि लागु गरेको जस्तो भएको सेक्टर प्रमुख जीवन अधिकारीले बताउनु भयो ।सुब्बाका परिवारले दोषीमाथि कार्यबाहीको माग गर्दै नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, यूएनएजसिआर, क्याम्प ब्यावस्थापन समिति र सुरक्षा निकायमा निवेदन पेश गरेको बताइएको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:34 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:23 AM No comments:
डा. राइको प्रेस विज्ञप्ति
भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका अध्यक्ष डा. भम्पा राईले स्वदेश फिर्तीले मात्र आफूँहरुको समस्या समाधान हुने जनाउँदै पुनर्वासले शरणार्थीको कल्याण नहुने जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा केही समय पहिले अमेरिकामा हत्या गरिएका दमकको बेलडाँगी शिविरका युवा हरिलाल अधिकारीको हत्याले भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो मुलुक गएर पनि असुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।
सो प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:08 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 11:03 PM No comments:
शरणार्थी एकिकृत आन्दोलनमा
भूटान पिपुल्स पार्टी ड्रुक नैशनल कङ्ग्रेस र भूटान र्गोखाको सयुंत्क्त मोर्चा (एनफडी) को विहिवार बसेको बैठकले अमेरिकाको फ्लोरिडा स्टेटमा चार महिना अगाडी परिवार सहित गएका हरिलाल अधिकारीको अज्ञात समुहद्वारा हत्या भएकोमा मोर्चाले गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ भने दोषीमाथि कडा र्काबाही गर्न अमेरिकी सरकारसगँ मागँ समेत राखेको छ ।
बैठकमा र्पूनवाशमा गएका शरणार्थीहरुको सुरक्षामा सम्बन्धित राष्ट्र सघंले चासो देखाइ अमानवीय घटनाहरुबाट शरणार्थीहरुलाई जोगाइ नयाँ भविष्यको खोजी गर्न सहयोग गरी सन् १९५१ को "रिफ्युजी कन्भ०न्सन"मा उल्लेख गरेको तीन विकल्प मध्ये पहिलो र दोस्रो विकल्पका ढोका पनि मर्यादापूवर्क राष्ट्रसङघीय ले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी चाँडोभन्दा चाँडो पहलगरी खुला गरी दिन मौर्चाका प्रवक्त नारद अधिकारीलै विज्ञपित्तमार्फ जनाउनु भएकौ छ ।
हाल राष्ट्रसङघीय ले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरि तेसा्रे मूलुकमा १६ हजार बढी शरणार्थीलाई पुनस्थापना गरि सकैकौ छ ।
त्यसैगरी मोर्चालै १५ जूलाई २००९ मा लिबरेसन आर्मी अफ भूटान (LAB) भूमिगत संगठनले शिविर भित्र सूचना गरि स्वदेश फितीको प्रकृया २१ दिनमा नभए राजनेतिक नेताहरुलाई भौतिक र्काबाहि गरिनै चेतवानिमूलक पर्चालाई मौर्चाल गम्भीर ध्यान आकर्शण जनाएकौ प्रवत्त अधिकारीलै बताउनु भएकौ छ । विगतका दिनहरुमा शीर्षस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हत्या भईसकेको र यस चेतावनीमूलक पर्चाले अन्योल आतंक र असुरक्षा पैदागराएकोमा नेपाल सरकारसगं सुरक्षाको मागँ गरेको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 4:48 AM No comments: